Indlu ekumqolo wokuqala ukuya kwindawo ephilayo - kufutshane ne-KBH - I-Airbnb
Indlu ekumqolo wokuqala ukuya kwindawo ephilayo - kufutshane ne-KBH
Indlu engenabugocigoci ekumqolo wokuqala ukuya kwindawo ephilayo - imeko yendlu esemaphandleni yasehlotyeni ekwikhilomitha eziyi-15 ukusuka eRådhuspladsen.
Indlu esecaleni ngqo kwindalo, enetye lamaplanga eliyi-180 m2, indawo yokupaka esimahla, itshaja yemoto yombane, iWifi, iindawo eziyi-8 zokulala, ikhitshi elitsha/igumbi lokuhlala (iminyaka eyi-3), ukufikelela ngqo kwindalo kumagumbi amabini.
Ibhasi ekwiimitha eziyi-500, kwaye uloliwe uhamba ngeekhilomitha eziyi- ukusuka endlwini - ukuya ngqo eCopenhagen
Le ndlu yindlu esecaleni ngeminyaka yoo-1960, enekhitshi/igumbi lokuhlala elineminyaka emithathu. Olu hlobo lwezindlu luhlobo oluqhelekileyo lwezindlu zaseDanes. Ngokuqinisekileyo uhlobo lwezindlu ezininzi ezihlala abantu abaninzi eDanes. Eli likhaya lethu, ngoko nceda ulindele ukudibana nawe. Namhlanje ikati ihlala endlwini kwaye inokuzihoya, kodwa iya kuvuya ukuba iindwendwe zimnika ukutya kwekati kwindawo yokubeka impahla.
Igumbi elinye yindawo ezimeleyo, kodwa elula, eneebhedi ezimbini ezintle nokuya ngqo kwintente negadi.
Igumbi elinye lokulala ngaphakathi endlini linokungena ngqo egadini nakwindawo engaphantsi komhlaba. Amanye amagumbi amabini, ndiwasebenzisela abantwana. Omnye unefuton apho unokulala khona abantu ababini. Elesibini linomgangatho ophezulu webhedi yendoda eyi-1 ½.
Igumbi lokuhlambela lineshawa kunye nebhafu kunye nendlu yangasese (kufuneka isoloko isetyenziswa ukuze ingavalwa). Kukho nelinye igumbi elinendlu yangasese yondwendwe.
Ekugqibeleni kukho ikhitshi/igumbi lokuhlala kunye negumbi lokuhlamba iimpahla.
Ngaphandle, ityeya yamaplanga yanda ngaphezu kwe-160 m2. Kukho iindlela ezininzi zokungena ngqo ukusuka endlwini ukuya kwintente. Ithala liyakwazi ukufikelela kwingca nokubona i-Egebjerg Nature Park.
Igaraji inetshaja yemoto yombane.
32" HDTV ene-I-Chromecast
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Ballerup